Shirka dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo ka furmaya degmada Goldogob | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Shirka dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo ka furmaya degmada Goldogob
Shirka dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo ka furmaya degmada Goldogob
Iyadoo lagu wado in maalinta berri ah uu ka furmo Dagmada Goldogob waji labaad ee Dhameystirka dib u heshiisiinta beelaha daga galbeedka Gobalka mudug ayaa maanta waxaa gaaray Salaadiin,waxgarad iyo nabadoonno ka ambabaxay saaka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Ergadaan oo ay wehliyeen xildhibaano Ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Fadaraalka Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay afaafka hore ee Dagmada Goldogob, halkaas oo ay uga hor yimaadeen waxgaradka,maamulka iyo qeybaha kala duwan ee ku nool Dagmadaasi goldogob.
Shirkaan lagu wado inuu ka furmo Goldogob ayaa daba socda shirweynihii nabadeed oo lagu qabtay horaantii bishaan juun deegaanka Bandiiradleey kaas oo laga Soo saaray qodobo ku aadan Soo afjaridda colaadaha iyo dirirta in ka badan sodonka sanadood ka jirtay deegaannada u dhaxeeya Dagmooyinka Goldogob iyo Gaalkacyo.
Maalinta berri ah ayaa lagu wadaa in shir nabadeed socon doona muddo dhowr cisha ah uu ka furmo Dagmada Goldogob ,kaasi oo ay ka qeyb-galayaan dhammaan bulshada ku nool deegaanka,iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee Barlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Maqaal horeMaxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo u fariisatay Dacwad loo heystay labo eedeysane
Maqaal XigaGudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo siyaasada G/Sh.hoose oo kormeeray isbitaalka iyo xarunta maamulka Degaanka Ceeljaale